Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane C/raxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yariisow) ayaa maanta booqasho ku tagay Wadada Sodonka ee Muqdisho oo mudooyinkan ay ka socdeen howlo dib u dhis ah oo heer gebogebo ah maraya
Eng. Yarisow waxaa kormeerkiisa ku wehlinayay masuuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir, isagoo la kulmay Masuuliyiinta degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan iyo saraakiisha booliska labadaas degmo.
Waxa uu warbixin ka dhageystay Injineerada ku howlan dhismaha wadada Sodonka oo hadda qeybaheedii ugu dambeeyey laami saarid ay ku socoto.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane C/raxmaan Yariisow ayaa sheegay inay dhisayaan dhamaan wadooyinka burbursan ee magaalada si loo soo celiyo bilicda magaalada isku socodka gaadiidka iyo dadweynahana ay u sahlanaato.
Wadada Soddonka ayaa waxay martaa afar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo kala ah Hodan, Warta Nabada, Howlwadaag, iyo Yaaqshiid waxaana oo ka mid aheyd kuwa ugu burburka badan sanad ka hor dhismaheeda dhagax dhigay Raisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Al-Shabaab oo sheegtay iney qabsatay saldhigii AMISOM ee Buulo Mareer, 59 askarina leysay
WARKA 01 04 2018 Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay madaxda u qaabilsan Soomaaliya Qamarada Midoobay iyo Mdowga Afrika
Information Minister appoints new directors for State media and National Theatre